Skin Cancer – Healthy Life Journal
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းက နေလောင်ဒဏ်ရာနှင့် အရေပြားကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်
———၊ ကိုထက် ၊——— နေပူထဲမထွက်ခင် လူအများစုက နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မယ့် အသားအရေကို နေကာခရင်မ် လိမ်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ အခုလေ့လာမှုအသစ်အရ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းဟာ နေကာခရင်မ်လိုမျိုး ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အရေပြားအား ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကို တိုက်ရိုက်သုတ်လိမ်းတဲ့အခါ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်ကြောင်း လေ့လာသူတို့က ဆိုပါတယ်။...
အရေပြားက အချက်ပြနေသည့် ကိုယ်တွင်းရောဂါဝေဒနာ ၈ မျိုး
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ရှိ၊ မရှိ သိချင်ရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ပြီး ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရေပြားက ကိုယ်တွင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပြသနေတဲ့ အဓိကအရာတစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် အရေပြားက အချက်ပြနေတတ်တဲ့ ကိုယ်တွင်းကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။...
ငွေကြယ်စင်ယံ (၁) နေရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပါ အရေပြားဖုံးအုပ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမဆို အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေတဲ့ မျက်နှာ၊ လည်ပင်းနဲ့လက်တွေဟာ အရေပြားကင်ဆာ အဖြစ်များဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေပါ။ နေဒဏ်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ နံနက် ၁၀ နာရီကနေ ညနေ...
မှဲ့ကင်ဆာ ကုသပျောက်ကင်းထားသူ ကိုမျိုးမင်းစိုး
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကိုမျိုးမင်းစိုး၏ လည်ပင်းရှိ မှဲ့သည် သိသိသာသာ ကြီးမလာ၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှု မရှိသော်လည်း ဘေးဘက်သို့ နည်းနည်းချင်း ပြန့်လာပြီး အင်္ကျီကော်လာနှင့် ထိတွေ့မှုကြောင့် စတင်ယားယံလာခဲ့သည်။ “အစ်ကိုကလည်း အဲဒီအချိန်မှာ အားကစားလုပ်တော့ ကြက်တောင်ရိုက်တဲ့အခါ ချွေးထွက်များပြီး...
ယခင်တစ်ပတ်မှ အဆက် ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) (အတွင်းရေးမှူး၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း (၈) အရေပြားကင်ဆာ Q. အရေပြားကင်ဆာက ဘာကြောင့် အဓိကဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. အရေပြားကင်ဆာကို အဓိကသုံးမျိုးခွဲခြားထားပြီး အဓိကက နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့မှုများသူတွေ၊ နေ...
တိုင်းရင်းလိမ်းဆေးကြောင့် အရေပြားကင်ဆာပျောက်ပြီဟု အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုသော်လည်း မယုံကြည်သင့်ဟုဆို
မိုးမင်းထွန်း နယူးဇီလန်မှ ဘရီတာဟော်လိုစ်ဆိုသူ အမျိုးသမီးက ဆရာဝန်တွေကန့်ကွက်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းလိမ်းဆေးတစ်မျိုးနဲ့ သူရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်က အရေပြားကင်ဆာအနာကို ကုသနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။၆၃-နှစ်အရွယ် လူနာအမျိုးသမီးက တိုင်းရင်းဆေးကို အသုံးမပြုခင် ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို သေသေချာချာ လေ့လာခဲ့တယ် လို့ ပြောပါတယ်။ ဟော်လိုစ်ဟာ ဆရာဝန်တွေကို တိုင်ပင်ခြင်း မရှိရုံသာမက...
၁၀နှစ်ကြာရှိနေသည့်မှဲ့က သေစေနိုင်သော မှဲ့ကင်ဆာ ဖြစ်နေကြောင်း သိလိုက်ရသော သတို့သမီးလောင်း
မိုးမင်းထွန်း သူ့မျက်နှာပေါ်က မှဲ့ ဟာသေစေနိုင်တဲ့ ကင်ဆာမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ ဝေဒနာသည် တစ်ယောက်ဟာ တခြားလူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့မှဲ့တွေကို စစ်ဆေးကြည့် ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ယူကေနိုင်ငံ၊ ရော့ရှိူင်းယားဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဂမ်မာ ကော့ထန်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀...
အရေပြားကင်ဆာတွင် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး မှဲ့ကင်ဆာ
– မှဲ့ကင်ဆာဟာ အရေပြားမှာစတင်ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားအင်္ဂါတွေဆီကို ပျံ့နှံ့တဲ့ရှားပါးတဲ့ ရောဂါအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ – အတွေ့ရအများဆုံးလက္ခဏာမှာ မှဲ့အသစ်ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ ရှိပြီးသားမှဲ့အပေါ်မှာ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်တာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ – ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့မှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အများအားဖြင့် နောက်ကျော၊ ခြေထောက်တွေ၊ လက်မောင်းနဲ့ မျက်နှာတို့မှာ...
အရေပြား ကင်ဆာအတွက် တတိယအကြိမ် ကုသမှုခံယူခဲ့ရသည့် ဟျူးဂျက်မန်းက နေပူခံလိမ်းဆေး လိမ်းကြရန် တိုက်တွန်း
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ X-Men ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဟျူးဂျက်မန်းဟာ သုံးကြိမ်မြောက် အရေပြားကင်ဆာ ကုသမှုကို ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ခံယူခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။ X-Men ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဟာ မကြာသေးခင်က အရေပြား ဆဲလ်ကင်ဆာအတွက် ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီး အခုအခါမှာ လုံးဝသက်သာသွားပြီလို့ မင်းသားရဲ့...